HeatSync: ọgụgụ isi na nyocha
HeatSync na-enye ụzọ iji chịkọta data nchịkọta disparate na ọtụtụ isi mmalite, hazie data ahụ, chekwaa ya ma chee ya n'ụzọ na-enye nghọta dị mma na ntanetị na arụmọrụ weebụsaịtị. HeatSync na-ewepụ data site na Alexa, SimilarWeb, Compete, Google Analytics, Facebook, Twitter, Klout, MOZ, CrunchBase na WOT iji mezue profaịlụ, usoro iheomume na igwe nyocha maka saịtị gị. Nkọwapụta Weebụsaịtị - Profaịlụ Weebụ HeatSync na-enye echiche miri emi n'ụzọ miri emi n'akụkụ niile
Anụrụ m banyere Klout obere oge gara aga mana anaghị elebara m anya ruo mgbe m zutere ụfọdụ ndị otu Klout na Las Vegas. M nwalere ya ma chọpụta na ụfọdụ akara akara na-efu. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ n'ime anyị nwere ọtụtụ peeji, ọtụtụ akụkọ, na akụkọ ntolite n'ịntanetị nke gbasara afọ iri… mana ihe niile emeghị Klout. Oge ikpeazụ Klout mere ka ọ bụrụ akara, ha tụfuru m kpamkpam. Na
Ọnụ ọgụgụ dị mkpa mgbe ọ bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Anọ m na-akatọ Klout mana ọ masịrị m na ụlọ ọrụ ndị ahụ na-anwa ịmepụta usoro dị mfe iji chọpụta ebe na ndị nwere mmetụta n'ịntanetị. Anaghị m eme ka ighota akara Klout nke ukwuu, echegbughị m banyere ya oke. Ma… site n'oge ruo n'oge, ana m enyocha na akara Klout m (ngwa Klout iPhone ka ị gosipụta ya!). Ọ bụrụ na ị
Enwere otutu ije na-eme ugbu a na ụlọ ọrụ akara. Echere m na Klout enwetatụbeghị nkatọ na nso nso a… ọ siri ike ịbụ onye mbụ na ngwugwu n'ọhịa ọ bụla. Enwere m ekele na mmadụ weere ọrụ siri ike nke ịmepụta akara ikike mbụ na ụlọ ọrụ ahụ, agbanyeghị, na-atụ anya na ha nwere ike ịmegharị algorithms ha ma nọgide na-azụlite ha. Otu n'ime ndị asọmpi m hụrụ ka ọ na-arị elu
Wednesday, April 21, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Ntị ndị na-ere ahịa mgbasa ozi ọha na eze: ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ abụghị akara ngosi siri ike nke mmetụta. Chọpụta… ọ doro anya ma dị mfe - mana ọ dịkwa umengwụ. Ọnụ ọgụgụ ndị Fans ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ anaghị enwe njikọ ọ bụla na ikike mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emetụta ndị ọzọ. Njirimara asaa nke Mmetụta Ndị Na-akpata Mmetụta Onye na-emetụta ihe n'ụzọ mbụ ga-etinye aka na mkparịta ụka dị mkpa. Onye omeebe nwere ụmụazụ bajillion apụtaghị na ha ga-emetụta ndị ọzọ gbasara ngwaahịa gị